चिकित्सक भन्छन् : हामीलाई घोषणा गरेको भत्ता खोइ ? – Himalaya Television
चिकित्सक भन्छन् : हामीलाई घोषणा गरेको भत्ता खोइ ?
२०७८ जेठ १६ गते ९:३७
१६ जेठ २०७८ जाजरकोट । सरकार आफैँले घोषण गरेको तलबभत्ता नपाएको भन्दै डोल्पा र जाजरकोटका चिकित्सकले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत चिकित्सकहरूले कोरोना सङ्क्रमितको कुनै पनि उपचार र सेवा नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
सरकारले बाँकी सात जिल्लाका चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्तावापत ५० प्रतिशत र कोभिड भत्तावापत शतप्रतिशत रकम दिइरहेको छ । डा हमालले कर्णालीमा चिकित्सक बसेनन् भनेर दिइएको प्रोत्साहन भत्तालाई कोभिडको जोखिममा उपचार गरेको भत्तामै मिसाउन नहुने बताउनुभयो । अरू सबैले भत्ता लिँदा चिकित्सकलाई मात्रै नदिने कुराले हतोत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
अक्सिजन पु-याउन मुस्किल
घोषणा चिकित्सक भत्ता